Miisa 1 840 ireo tranga vaovao…: 29 ireo lavon’ny Covid-19 tao anatin’ny herinandro | NewsMada
Andrasana izay ho fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana, amin’ny hanohizana na tsia ny ”fahamehana ara-pahasalamana” vokatr’ity covid-19 ity. Nandavo olona 29 sy nahitana tranga vaovao 1 840 izany valanaretina izany tamin’ity herinandro ity.
Hiditra amin’ny hamehana ara-pahasalamana manaraka indray isika, manomboka ny alahady izao. Mialoha izany, nana­marika iny herinandro iny
ny hamaroan’ireo lavon’ny Covid-19. Miisa 29 izany, nanomboka ny 1 aogositra hatramin’ny omaly, ka manodidina ny telo na efatra isan’andro eo ho eo izany. Niavaka kosa anefa ny antontanisa ny alakamisy lasa teo fa miisa fito ireo lavo. Anisan’ny ambony koa, taorian’ny tamin’ny 16 jolay, nahafatesana olona miisa 10, tao anatin’ny iray andro izany.
Tsy mifanalavitra amin’izany koa anefa ny teo anelanelan’ny 25 hatramin’ny 31 jolay. Nahatratra 30 ny isan’ireo nodimandry noho ity valanaretina ity. Hatreto aloha izany, tafakatra 136 ireo lavon’ny Coronavirus eto amintsika.
1 840 ireo nifindran’ny valanaretina
Etsy andaniny, miisa 1 840 ireo nifindran’ny valanaretina, hatramin’ny fiantombohan’ny volana aogositra ity hatramin’ny omaly. Ni­songadina indrindra tamin’izany ny voalohan’ny volana teo iny. Nahatratra 405 ireo tranga vaovao.
Raha tsiahivina ny antontanisa, omaly, iray ny lavon’ny Covid-19. Notsaboina tany amin’ny faritra Atsi­nanana. Miisa 182 ireo tranga vaovao ka mbola ivon’ny valanaretina sy ny « frome grave » hatrany ny eto Ana­lamanga. Miisa 141 izany raha sivy ny any Matsiatra Ambony. Valo ny any Ihi­rombe ary fito ny any Atsimo Andrefana. Enina kosa ireo tranga vaovao any Boeny raha telo ny any Menabe. Ahitana tranga vaovao roa avy ny any amin’ny faritra Itasy sy Amoron’i Mania ary i Betsiboka. Iray avy ny any Atsinanana sy ny faritra Sofia.
Andrasana ny fanapahan-kevitra sy ny fepetra
Miisa 93 ireo marary mafy ka avy eto Analamanga ny 75 amin’izany. Mitsinjara ho 37 etsy Befelatanana. Sa­my ahitana 16 avy eny amin’ny HJRA sy eny Anosiala. Miisa efatra ireo marary mafy eny Fenoarivo ary roa kosa ny eny amin’ny Homi, Soavi­nan­driana. Manampy ireo ny any amin’ny faritra Matsiatra Ambony, miisa 10 raha enina any Boeny ary iray kosa ny « forme grave » any Betsi­boka.
Araka izany, andrasana ny mety ho fanapahan-kevitry ny fitondrana sy ny fepetra manoloana ireo antontanisa ireo, indrindra ho an’ny eto Analamanga.